Wavy Perm ee Ragga - Daryeelka Ragga ee Qaabka | Ragga Stylish
Marinka ruxruxa ee ragga ayaa ah ikhtiyaar ikhtiyaar ah oo ikhtiyaari ah oo u yaal dhammaan kuwa doonaya leeyihiin curlsyaal qurux badan. Xajmiga 'perm' macnaheedu maahan inuu leeyahay timo aad u jilicsan madaama ay jiraan shucuur lagu sameyn karo nooc kasta oo mowjado ah, perm dabacsan waxaan ugu yeeri doonnaa qaab. Astaamaheeda muhiimka ah ayaa ah inaad had iyo jeer yeelan doonto timo aan iin lahayn, iyadoon loo eegin duruufaha xun ee kugu hareeraysan.
Haysashada joogtada ahi waa faa'iido. Waad iloobi kartaa inaad isticmaasho burushka maxaa yeelay uma baahnid inaad xoqdo curlsyada quruxda badan oo aad kala furfurto, taabasho yar oo qoyan ayaad timaha ugu hagaajin kartaa markaad u baahato. Haddayna xaaladaha cimiladu had iyo jeer la socon karaan timahaas toosan ee aan dhammaanayn ama had iyo jeer qallooca ama toosan, perm marwalba waxaad kuheleysaa curlkaas meesha.
1 Maxaad ubaahantahay inaad ogaato kahor intaadan helin perm?
2 Sidee loo sameeyaa perm?
3 Daryeelka marinta kadib
4 Alaabada loogu talagalay dhamaadka dhamaadka timaha jilicsan
Maxaad ubaahantahay inaad ogaato kahor intaadan helin perm?
Joogto ah waa in la helo timahaas jilicsan iyadoo la kaashanayo kiimikooyin taasi ayaa calaamadeyn doonta dhinacaas. Tan waxaa lagu gaaraa timajarayaasha halkaasoo xirfadle uu timahaaga u saari doono gacmaha ama guriga, halkaas oo ay horeyba u jireen casharro ku saabsan sida aad ugu baran karto guriga.
Waa inaad ku ogaataa taas mid joogto ah kiimikooyin gaar ah ayaa la isticmaalaa kuwaas oo waxyeellayn kara timaha, laakiin ma gubto. Weligaaba waxay noqon doontaa mid faa iido badan oo caafimaad leh in joogto laga dhigo in haddii aad isku daydo inaad xoqdo timahaaga maalin kasta adoo adeegsanaya alaab.
Waqti ka dib, curlku wuu furi karaa oo wuxuu waayi karaa xooggiisa, laakiin waxaad marwalba heli kartaa koritaan kale oo joogto ah dhibaato la'aan. Haddii wakhti kasta oo aad rabto inaad timo toosan yeelato kadib markaad farsamadan sameyso, wax dhib ah malahan inaad sameyso, maadaama curlkaagu uusan lumin doonin xoog.
Haddii timahaagu u janjeeraan inay waxyeelo gaar ah ka soo gaadho midabbada ama alaabooyinka kiimikada awgood, marwalba waad awoodi kartaa toddobaadyo ka hor ku samee dhowr daaweyn timahaaga si aad u nidaamiso jilicsanaantaada oo aanad u ciqaabin naftaada.
Sidee loo sameeyaa perm?
Talo ahaan, inaad awood u yeelatid curling noocan ah waxaa lagugula talinayaa inaad yeelato ugu yaraan timo yar oo dheer. Waa inaad indho indheysaa in timuhu ay aad u yaraanayaan marka aad qaadanaysid curlkaas. Qalabka loo isticmaali doono waa caag-ga caadiga ah ama curlers alwaax ah. taas oo silsilad kasta oo timo ahi ku dhaawacmi doonto.
Waxaan ku soo rogi doonnaa xargaha timaha hareeraha meerisyadan iyo Waxaan sii wadi doonaa inaan ku shubno dareeraha kiimikada gaarka ah ee perms. Dareerahani wuxuu jebin doonaa buundooyinka gudaha ee fijarka timaha si ay u qaataan qaabka ruxruxa.
Waqtiga sugida alaabada ayaa dhaaftay (waqti cayiman oo kuxiran shirkada soosaartay) timaha waxaa lagu mayrin doonaa biyo badan oo kulul iyada oo aan laga qaadin qalabka wax lagu dhejiyo. Marka xigta, dareeraha dhexdhexaadka ah ayaa la adeegsadaa kaas oo hagaajin doona curlka.
Waxaan ka saareynaa curlers oo waxaan timaha u duugeynaa si tartiib ah si aan u ballaarino sheyga. Ugu dambeyntiina waxaa lagu soo qaadaa biyo diirran oo qaboojiye kuwa aan laga saarin ayaa lagu dabaqayaa.
Daryeelka marinta kadib
Marka ay timaado dhaqida timaha waa inaad u isticmaal shaambo gaar ah timaha jilicsan. Waxaad ku dari kartaa nooc ka mid ah daaweynta hagaajinta timaha.
Waad codsan kartaa kareem jilicsan ama qaboojiye ah si aad timaha uga furto farahaaga. Ka maydh qaboojiyaha ka dib.
Ku duub timahaaga tuwaal si aad u nuugto biyo saa'id ah iyo sii wado furitaanka. Waxaad isticmaali kartaa burushkaaga caadiga ah, laakiin waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho mid leh fiilooyin ballaaran oo ka samaysan fiilooyinka kaarboon, Tani waxay ka hortageysaa timaha inay dhalaalaan ama koronto dhalaalaan markay qallalaan.
Si loo dhammeeyo, waan awoodnaa dooro shey si aad u qeexdo curlka oo aad u ahaato biyo, Laguguma talin inaad isticmaasho xumbo ay ku jiraan aalkolo.
Talo ahaan waa lagu talinayaa isticmaal maaskaro wax lagu hagaajiyo 15-kii maalmoodba mar si timahaas loo ilaaliyo caafimaad iyo biyo.
Alaabada loogu talagalay dhamaadka dhamaadka timaha jilicsan
Waxaa jira alaabooyin gaar ah oo loogu talagalay dhammaystir dhammaystiran timaha timaha. Waxaan u adeegsan karnaa curiyaha hagaajiye kaas oo siiya muuqaal dabiici ah ama qoyan. Waxaa jira hagaajiyeyaal hagaajin doona curlkaas iyadoo timaha ka dhigeysa mid jilicsan oo jilicsan. Si aad wax badan uga aragto badeecadan waad eegi kartaa maqaalkeenna ku saabsan alaabooyinka kaa caawinaya inaad siiso muuqaal muuqaal ah.
Waxaa jira qaar boomaato ah oo la yiraahdo putties si ay u siiyaan xakamayntaada curlkaaga. Badeecadani waa mid u adkaysata qoyaanka waxayna ka caawisaa sidii ay u ilaalin lahayd jahwareerka. Mid ka mid ah kareemadan sida cajiibka ah u shaqeeya ayaa ah TIGI Bed Head Men Matte Separation, Waxyaabaha noocan oo kale ah waxay siin doonaan dhameystir cufan si timaha ay ugu muuqdaan kuwo dabiici ah oo aan dhalaal lahayn.
Badeecad kale oo aad u dooran karto taabashada ugu dambeysa ayaa ah serum si kor loogu qaado dhalaalka iyo fuuq-baxa. Waad u isticmaali kartaa inta jeer ee aad u aragto inay ku habboon tahay laakiin adigoon si xun u adeegsan, maadaama qaarkood ay ku jiraan waxyaabo badan oo silikoon ah ayaa dhib ka dhigi kara dib u soo celinta kuwa cusub ee joogtada ah
Faahfaahin ahaan haddii taadu aysan helin perm waxaad ka akhrisan kartaa taladeenna sida loo yeesho timo jilicsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Wavy perm ragga